Ngomuntu ongazange asebenzise yonke impilo esakhiweni sokwakha, umbuzo wokuthi ungayifaka kanjani phansi endlini endlini yokhuni kungaba nzima kakhulu. Noma kunjalo, konke kulula kakhulu kunokuba kungabonakala ekuqaleni. Ake sibeke emashalofini konke okukhethwa kukho ukushisa okusetshenziselwa le njongo, bese ukhetha okungcono kakhulu kwimeko ngayinye ethize.
Kungani ubeka phansi phansi
Sonke sizama ukulondoloza imali kulokho esingakwenza, akusona uphawu lokuhaha, kodwa ukwakhiwa okufanele kwesabelomali sethu. Futhi uma wazi ukuthi ungayifaka kanjani phansi phansi, ungagcina izindleko zokushisa ngamaphesenti angaba ngu-20. Lokhu kungenxa yokuthi izinga lokushisa phansi lizohlala lide degrees ezintathu ngaphezu kwekamelo ngokwalo. Ngakho-ke, uzobe ukhululekile nakakhulu ngisho nokusetshenziswa okuncane kokushisa kwakho.
Okokuqala, udinga ukunquma ukuthi yiluphi uhlobo lwesisekelo ozokwenza ekhaya lakho elisha. Kodwa noma ngabe uthenge izindlu ezenziwe ngomumo, futhi phansi phansi kubanda, ungabheka uhlobo lwesisekelo. Futhi uma i-tape yesisekelo noma indlu isendaweni yezinqwaba, ukufudumala kuyisilinganiso esidingekayo kakhulu. Phela, phansi kwendlu kukhona namanqamu, angeke anikeze ukuthungwa kwezinto ezishisayo. Kodwa ungayifaka kanjani phansi endlini endlini yezinkuni ngokufanele, uma isakhiwe isikhathi eside? Udinga ukukhetha ukuchithwa okulungile. Kungcono ukunikeza izintandokazi emafenini awaziwayo azinzibonakalise emakethe yokwakha. Ngoba, ukulondoloza endaweni yokushisa, ungathola umswakama ophezulu endlini ngisho nefungus.
Yonke into ehlukaniswayo ingahlukaniswa ngalezi zinhlobo ezilandelayo: amaminerali (ubumba obunwetshiwe), ipulasitiki (i-foam kanye neziqhamo zayo), i-silicate (i-glass wool) kanye ne-shaving (i-ecowool noma i-sawdust evamile). Ungakhetha kahle indaba oyidingayo. Kodwa khumbula ukubaluleka okubalulekile - ngayinye yawo inezobuchwepheshe bayo kanye nemithetho yokugubha kanye nokufaka isicelo.
Ukugxila phansi endlini enamapulangwe ungakwazi futhi wena ngokwakho, into esemqoka ukwazi ukuthi kanjani. Uhlobo oluvame kakhulu lokufakelwa kwegazi lungabizwa ngokuthi uhlelo lwesiteji esiphansi. Lona okuthiwa ukwahlukana kube yindawo ehlanzekile neyinkimbinkimbi. Esikhathini esingqimba sokuqala, amabhodi amancane angagudluki asetshenziselwa, ahleliwe emigodini. Kumele kukhunjulwe ukuthi zonke izici zokhuni kufanele ziphathe isisombululo se-antiseptic ne-antifungal. Ambozwe ngendwangu yensimbi ehlelwe kahle. Kuzosiza ukuvikela indlu kusuka kumagundane. Khona-ke udinga ukubeka ungqimba wesikhubekiso sefilimu esizovimbela ukukhululwa kwemoya efudumele nokufika kobandayo. Futhi kakade kuso kuwela uboya obunamaminerali. Ubukhulu be-insulation kumele kube phakathi kwalokho phakathi kwezingxenye zephansi kukhona igebe elingamamentimitha angu-5. Lokhu kuzokusiza ukuvimbela ukuqoqwa komswakama nokuqinisekisa ukungena kwemvelo okuthembekile. Phezu koboya obunamaminerali bebeka esinye isendlalelo somkhawulo womoya, emva kwalokho ungaqala ukuba nesitezi sokuqeda. Manje siyazi ukuthi singayifaka kanjani phansi endlini yokhuni ngosizo loboya bamaminerali. Nge-sawdust ne-ecowool isimiso sesenzo sizohlala sinye. Kodwa kuthiwani ngokunye?
Indlela yokufaka phansi phansi endlini enamapulangwe ngosizo lobumba obunwetshiwe
Ubumba olunwetshiwe buyinto engabizi, kodwa lokhu akusho ukuthi kuwuhlobo olubi. Ngezindawo zalo, lokhu kuhlukanisa ngisho kudlula ezinye izinto - i-sawdust ne-chipboard. Kubekwa phezu koqweqwe lokungena kwamanzi, indima engayenza kanye nefilimu evamile. Khona-ke udinga ukuxuba ama-granules ahlukene webumba olwandisiwe bese uligcwalisa ngendawo elungiselelwe. Ukuphakama kwesendlalelo kufanele kube okungenani ngu-15 cm. Lokhu kuyadingeka ukuze kube nokuthungwa okuphezulu kokushisa. Ngemuva kokuthi indaba igcwaliswe futhi yenziwe, ungafaka phansi phansi. Yizo zonke izinyathelo. Manje uyazi ukuthi ungayifaka kanjani phansi endlini ekhuni. Njengoba ubona, zonke izenzo zilula, okusho ukuthi kunokwenzeka ukuthi ukwazi ukuphatha ngokuzimela. Ukwakhiwa noma ukulungiswa okuphumelelayo!
Indlela yokuqothula amatayela?
I-Lacquer yokushisa emlilweni yezindawo zokucima umlilo nama-stove: izinhlobo, izici
Ukulungiswa kwesikhungo sokukhiya: ukuqhutshwa kwesinyathelo ngesinyathelo
Kanjani zidala eyikati? Izici zokuphila
Iklabishi Red. Yini ukupheka kuwo?
Ukugxila - okuqondile. Uphi lapho kufundiswa khona